Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Noraran'ny FAA ny zotram-piaramanidina amerikana rehetra tsy hisidina mihoatra an'i Afghanistan
Vaovao Mafana Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Izay mpandraharaha fiaramanidina sivily amerikana te-hanidina / hivoaka na hihoatra ny Afghanistan dia tsy maintsy mahazo alalana avy amin'ny FAA.
Nanambara ny FAA fa ny Seranam-piaramanidina Kabul dia tsy fehezin'iza.
Ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana dia tsy tanterahina any Afghanistan.
Làlana iray monja manaraka ny sisin-tany atsinanana no misokatra.
Namoaka fanambarana ny US Federal Aviation Administration (FAA) androany izay nanambara fa voarara tsy hisidina manerana ny faritanin'i Afghanistan ny zotram-piaramanidina sivily afa-tsy làlana iray izay misokatra hatrany amin'ny sisin-tany atsinanana.
Ireo mpitatitra sivily “dia mety hanohy hampiasa lalana fiaramanidina avo lenta iray akaikin'ny sisin-tany atsinanana lavitra ho an'ny fitsangantsanganana mahery. Izay mpandraharaha fiaramanidina sivily amerikana te-hiditra / hivoaka na handingana an'i Afghanistan dia tokony hahazo alalana avy amin'ny FAA, "hoy ny fanambarana.
Talohan'izay, ny faa nanambara fa ny Seranam-piaramanidina Kabul dia tsy fehezin'iza ary ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana dia tsy atao any Afghanistan.
Niala tanteraka tao Afghanistan ny miaramila amerikana iray tamin'ny talata. Ny hetsika Taliban dia nanambara fa nahazo fahaleovan-tena tanteraka i Afghanistan.